जनगणनामा याक्थुङ थर लेख्नु लिम्बुवान प्राप्तिकाे अभियानविरुद्ध हुनेछ
यसपटक नेपालको जनगणनाबाट यी ५ कुरा हुनेछन्ः
१. हिन्दू धर्मालम्बीको संख्या घट्छ, ५५ देखि ६५ प्रतिशतमा रहन्छ । र हिन्दू राज्यको माग गर्नेको शक्ति घट्छ । तर सही तथ्यांक नदेखाइ पहिलाको भन्दा झनै बढी देखाउन पनि सक्दछ ।
२. यसपटकको नेपालको राष्ट्रिय जनगणनापछि लिम्बुवानको मुद्दा अन्त्य हुनेछ । किनकी, लिम्बुको संख्या अनुपातमा घट्छ । पहिलो कारण, लिम्बु धेरै (युके, अमेरिका) विदेशिए । दोस्रो कारण, दुईचार सयले थर याक्थुङ लेख्नेछन् । राजनीति र अधिकार प्राप्तिमा जनसंख्याको मुख्य भूमिका हुन्छ । लिम्वुवान सबै जातिको भूमि भनिए पनि दाबी गर्ने पहिलो स्टेकहोल्डर लिम्बु नै हो । त्यसैले लिम्बुको जनसंख्या घटे लिम्बुवानको मुद्दा पनि अन्त्य हुनेछ अर्थात अस्थित्वमा हुनेछैन ।
३. भारतमा ‘प्रधान’ थर सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त भएकोले सबैथरि नेवारहरुले प्रधान लेख्ने गर्दछन् । ‘शर्मा’ थर पनि भारत सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त भएको र शर्मा चिरपरिचित तथा सम्मानित भएकोले नेपालकै अधिकारी, आचार्य लगायतले समेत आफ्नो थर नेलेखी शर्मा लेख्ने गरेका छन् । त्यसको कारण हो सरकारको मान्यता, पहिचान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु हो । शर्मा थरको पहिचानको लाभ लिनु । तर, त्यसको ठिक विपरित पूर्वी नेपालमा रहने थोरै संख्यामा रहेको केही लिम्बुहरुले थरमा याक्थुङ र धर्ममा युमा हुनुपर्ने सवाल उठाएका छन् । थर लिम्बुको सट्टा याक्थुङ लेख्दा पहिलो कुरा सरकारले मान्यता दिएको छैन । दोस्रो कुरा लिम्बुको संख्या घट्नेछ । त्यसै पनि लिम्बुको जनसंख्या अनुपातमा घट्दाे छ । फेरि याक्थुङ लेखेमा विभाजित भई झनै घट्नेछ । धर्मको महलमा युमा लेखे किरात धर्मालम्बीहरुको संख्या घट्नुसँगै समग्र किरातको प्रभाव घट्नेछ र सरकारद्वारा दिने मान्यता र सुविधा पनि घट्नेछ । लिम्बु, राई, याख्खा, सुनुवार, धिमाल, सुरेल, जिरेल, थामी, हायु किरात भएको कुरा अकाट्य इतिहास छ । यसमा कसैले शंका र चिन्ता नगरे हुन्छ । अर्को सम्वेदशील सवाल भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल मुलुकमा राजनीतिक लाभको निम्ति धर्म प्रबद्र्धन हुन्छ । यदि तपाईले आफ्नो धर्ममा सचेत हुनुभएन भने अन्य धर्मले तपाईमाथि प्रभाव लाद्छ ।
यसर्थ, धर्मको नाममा युमा लेख्ने कुरा घातक छ । युमा शब्द आफैमा फेदापे लिम्बु भाषाको शब्द हो । त्यसैले युमा भन्ने वित्तिकै थोरै जनसंख्या भएको लिम्बुले मात्र मान्ने भन्ने कुरा हो । त्यसमा पनि अत्यधिक लिम्बुहरु किरात नै लेख्ने पक्षमा छन् भने दुईचार सयले मात्र युमा लेखेको खण्डमा कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ? किरात धर्म लेख्नुको अर्थ लारुम्बाकै सत्यहाङ विधि पछ्याउनु भन्ने होइन । भोगबलि चढाउने, नचढाउने, राईहरुको तीनचुले, सुनुवार, याख्खा लगायतको आ-आफ्नो विधि हो । तर गणनामा याक्थुङ थर र धर्मको महलमा युमा लेख्नु भनेको लिम्बुवान प्राप्ति अभियानको विरुद्धमा हुने देखिन्छ ।
अर्को पनि उदाहरणः
दलित जातिलाई सम्मानजनक शब्द शिल्पी जाति भनौ भनेर प्रस्ताव आयो । तर दलितका विज्ञहरुले स्वीकार गरेनन् । त्यसको कारण हो दलित शब्द सरकारद्वारा मान्यता पाएको र आन्दोलनको रुपमा स्थापित भइसकेको कारण हो । उसो त हिन्दूहरुको वेद र पुराणमा कतै पनि हिन्दू धर्म उल्लेख छैन । तथापि हिन्दू धर्म स्वीकार्य छ । मुन्धुम वा मुन्दुममा किरात शब्द होस्नहोस् स्वीकार्न सकिन्छ । र, अलिखित मुन्धुमको कुरा मात्र लिनु प्राज्ञिक क्षेत्रमा मान्य हुँदैन । स्थापित नाममा कति शक्ति हुन्छ ख्याल गर्न जरुरी छ ।
नेपालभित्र मुलवासी, आदिवासी जे सुकै भने पनि संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात बाहिरी विश्वले इण्डिजिनियर्स शब्द मात्र चिन्दछ । जतिसुकै ठूलो र कठोर अभियान आन्दोलन गर्नुहोस् इण्डिजिनियर्स भन्नु भएन भने बाहिर विश्वसँग जोडिन्न । यसर्थ, नामहरु यस्ता हुन्छन् कि सारा अस्थित्व नै त्यही शब्दमा हुन्छ । त्यतिसम्म स्थापित हुन धेरै कोर्स पार गर्दै आएको हुन्छ । जनगणनाबाट आएको तथ्यांककाे आधारमा सरकारी योजनाहरु बन्ने गर्दछ । युमा लेखिए एक प्रतिशत पुग्ने परिकल्पनै गर्न सकिन्न र सरकारी सुविधाहरु पनि प्राप्त हुन सक्दैन ।
त्यसैले थरमा लिम्बु लेखौ अर्थात याक्थुङ लिम्बु लेखौ । धर्ममा किरात लेखौ तबमात्र लिम्बुवानको आन्दोलन अघि बढ्छ । थरमा याक्थुङ मात्र लेख्नु र धर्ममा युमा लेख्नु आत्महत्या गर्नु समान हो । लिम्बुवान आन्दोलनको विरुद्धमा हुनेछ । यी कुरा ख्यालहोस् । यो अवसर फेरि पनि १० वर्षसम्म आउने छैन ।
४. यसपटकको नेपालको राष्ट्रिय जनगणनापछि किश्चियन धर्मालम्बीको प्रतिशत बढ्छ । बुद्धिष्ट, किरात, वोन, मष्ट र मुस्लिमको पनि प्रतिशत बढ्नेछ । तर, सही तथ्यांक भर्ने वा नभर्ने त्यो कुरा गणक र प्रशोधन गर्नेमा निर्भर हुन्छ ।
५. यसबेला धर्मको विषय स्वेच्छिक हो । त्यो भन्दा ठूलो कुरा संस्कार जोगाउनु हो मात्र भनिरहनु भएको छ भने तपाई नै भोलि गोरु काटेको निहुमा वा आरोपमा ३ वर्षको सट्टा १२ वर्ष जेल जानुपर्ने छ । गोरु काटेको निहुमा जेल जाने कि नजाने वा कति वर्ष जाने भन्ने कुरा यसपटकको जनगणनामा धर्मको महलमा के लेख्नुहुन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । यसर्थ, धर्म र राजनीति कति अन्तरसम्बन्धित हुन्छ र राजनीतिले बनाउने कानुनमा धर्म र धर्मालम्बीको संख्याको कत्रो महत्व हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
र, एक महान् व्यक्तिले भनेका छन्ः जसले धर्म र राजनीति एकआपसमा जोडिएको अर्थात परिपूरक हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दैन, उसले धर्म पनि बुझेको हुँदैन र राजनीति पनि बुझेको हुँदैन । र, आदाङ्बा, आदाङ्मा अब पनि लिम्बुवान आन्दोलन विसर्जनको लागि भूमिका खेल्ने कि लिम्बुवान प्राप्तिको लागि सक्रिय हुने ? (विश्वासदिप तिगेलाकाे फेसबुकबाट)
जनगणनामा सबै मगरहरुले नामको पछाडि ‘मगर’ र धर्ममा ‘बौद्ध’ लेखाउनुस्
राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी यायोक्खाको अभियान तीव्र
३९ हजार गणक, ८ हजार सुपरिवेक्षक पदमा भर्ना खुल्यो, अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने
१२औं राष्ट्रिय जनगणनामा खालिङ समुदायले जातिकाे महलमा ‘राई’ लेख्ने